Sequence, Selections & Iterations in Our Daily Life | mmshare
ကျွန်တော်တို့ အခြေခံပညာ အဆင့်မှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ သင်္ချာဘာသာရပ်တွေထဲက အချို့ဟာ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ချက်ချင်းကို အသုံးကျပါတယ်။ ဆယ်တန်းမှာ သင်္ချာသင်ရတဲ့ အချိန်က Sequence & Series ကို သင်ရတော့ ပုံသေနည်းတွေ၊ Function တွေထုတ်ပြီး ပုစာၦတွေ အဖြေထုတ်ရတာ အတော်လေး စိတ်၀င်စားစရာ ကောင်းပြီး၊ ပျော်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ အဲဒီ သင်္ချာသင်ခန်းစာတွေနဲ့ Computer Software Programming ဆက်စပ်မှုတွေ၊ နေ့စဉ်လူမှုဘ၀နဲ့ ဆက်စပ်နေတာတွေကို စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ ဒါမှ ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေကို ပိုပြီး တန်ဘိုးထား နားလည်နိုင်လိမ့်မယ် ၊ ကိုယ့်အတွက် မဖြစ်နိုင်တော့ရင်တောင် ညီ/ညီမငယ်တွေကို ပြန်ပြီး ေ၀မျှနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Sequence - အစီအစဉ်တကျ လုပ်ဆောင်ချက်များ
အလုပ်တစ်ခု လုပ်တဲ့အခါ ဘယ်ကနေ စလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက် ရှိရပါတယ်။ ဘယ်လို အခြေအနေမှာ ပြီးဆုံးမယ်၊ ဘယ်လို အနေအထားမှာ ရပ်မယ် ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင် ရှိပါတယ်။ တချို့အလုပ်တွေက တစ်ခုမပြီးခင်မှာ နောက်တစ်ခု အပြိုင် လုပ်လို့ရပေမယ့် တချို့ကတော့ တစ်ခုပြီးမှ နောက်တစ်ခု လုပ်လို့ ရတာပါ။ ရှေ့/နောက် အစီအစဉ်တကျ လုပ်မှ ရတဲ့ နေ့စဉ် အလုပ်အချို့ကို ဥပမာ ပြောရရင် - ထမင်းချက်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်း၊ ဘုရား၀တ်ပြုခြင်း - စတာတွေကို ဥပမာ ပြလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
အလားတူပါပဲ။ သင်္ချာ ပုစာၦတစ်ပုဒ်ကို တွက်ချက်တဲ့အခါ၊ စာစီစာကုံးတစ်ပုဒ်ကို ရေးသားတဲ့ အခါမှာလည်း ရှေ့နောက် အစီအစဉ်တကျ ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်္ချာပုစာၦမှာ “ထို့ကြောင့် အဖြေ” ဆိုတာကို အရင်ဆုံးချရေးလို့ မရသလို၊ စာစီစာကုံးမှာလည်း “အချုပ်အားဖြင့် ဆိုသော်” ဆိုပြီး နိဂုံးကို အရင်စရေးလို့ မရပါဘူး။ နေ့စဉ်ဘ၀မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်ပျုတာဆော့ဖ်၀ဲတွေ ရေးသားတဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေ တည်ဆောက် ကြတဲအခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစီအစဉ်တကျ ဆောင်ရွက်မှု (Sequential processing) ဟာ အတော်လေး အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ အစီအစဉ်တကျ ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားနိုင်မှ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်သက်သာ၊ လူသက်သာပြီး - လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လည်း မြန်မြန်ပြီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးဘ၀ ကျောင်းတက်တဲ့ အချိန်၊ သင်္ချာတွေ စသင်ရတဲ့ အချိန်ကတဲက လေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ အစီအစဉ်တကျ လုပ်ဆောင်မှုဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခြေခံသင်ခန်းစာ တစ်ခုပါပဲ။
Selections - ရွေးချယ်လုပ်ဆောင်ချက်များ
ရွေးချယ်မှု ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ အမြဲတမ်းကြုံနေရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။ မနက်/နေ့လည်/ညစာ စားတဲ့အခါလည်း ရွေးချယ်စရာတွေ ကြုံရပါတယ်။ မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်း၊ သူငယ်ချင်း၊ စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ အလုပ်သမား၊ လုပ်ငန်းခွင်အသစ်၊ ဘာသာတရား၊ ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဘက် -- စသည်ဖြင့် ဘ၀မှာ ရွေးချယ်စရာတွေ မဆုံးနိုင်အောင် များပြားလွန်းပါတယ်။ သာမန်ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်တစ်ခုမှာ ကြိုတင်ဖန်တီးထားတဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေဆိုတာ ဘ၀မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ ယှဉ်တဲ့အခါ အသေးအမွှားပါ။
ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်၀ဲတွေ ဖန်တီးတဲ့ အခါမှာတော့ - ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံရင် ဘယ်အလုပ်ကို လုပ်မယ်ဆိုတာ ကြိုတင် စီစဉ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိတန်ရာ သလောက်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကြိုတင်ဖန်တီးထား ကြရပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကြိုတင် မျှော်လင့်ထားတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ တစ်ခုမှ မကိုက်ညီရင် ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ အဆင့်အထိ စဉ်းစားထားရပါတယ်။ If... Else If.... Else If..... Else.... End ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ သွားကြရပါတယ်။
နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ မနက် အိပ်ရာထရင် ဘာလုပ်မလဲ။ မီးလာရင် ဘာကို အရင်လုပ်မလဲ။ ရုံးပိတ်ရက်မှာ မနက်ခင်း ဘာလုပ်မလဲ၊ နေ့လည်ဘာလုပ်မလဲ။ တကယ်လို့ နောက်ဆုံး မမျှော်လင့်ဘဲ ရုံးပိတ်ရက်မှာ အရေးကြီး ကိစ္စကြောင့် အချိန်ပို လုပ်နေရရမယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ။ စသည်ဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရတာတွေ အများကြီးပါပဲ။ ရွေးချယ်မှု (Selection) သဘောမှာ - အခြေအနေ (Condition) နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် (Actions) တွေ ပါလာပါတယ်။ ဘာဖြစ်ရင် (Condition) ဘာလုပ်မလဲ (Action) ပုံစံပါ။
ငယ်စဉ် အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသား သင်္ချာ (၂) သင်ခန်းစာတွေမှာ အများဆုံး လုပ်ခဲ့ရတဲ့ တွက်ချက်မှု လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ အခုလို Selection သဘောတရားတွေ ပါနေတာ ပြန်သတိရမိပါတယ်။
Iterations (Looping) - ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်ချက်များ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ် ဘ၀မှာ ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်ရတာတွေ အများကြီးပါ။ မနက်မိုးလင်းလို့ မျက်နှာသစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို စဉ်းစားကြည့်ရင် ရေခွက်ထဲက ရေကို ခပ်လိုက် - အဲဒီရေနဲ့ မျက်နှာကို ပွတ်သပ်လိုက် လုပ်ရတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သွားတိုက်တာလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုရခြင်းဆိုတဲ့ သဘောတွေ ပါရှိပါတယ်။ ထမင်းစားတဲ့အခါ၊ စာဖတ်တဲ့အခါ၊ တံမျက်လှည်းတဲ့ အခါစသည့်ဖြင့် စဉ်းစားနိုင်သလောက် Repetation (Looping, Iteration) သဘောတွေကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်ခြင်းရဲ့ အဓိက ထူးခြားချက်ကတော့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုတည်းကို - အခြေအနေ (Condition) တစ်ခု၊ သတ်မှတ်ချက် (State) တစ်ခုခုနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အခါမှာ စတင်လုပ်ဆောင်ပြီး၊ နောက်ထပ် အခြားအခြေအနေတစ်ခု၊ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုခုနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အခါမှာ ရပ်တန့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ဗိုက်ဆာလို့ အစာစားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှာ - ဗိုက်ဆာတယ် ဆိုတာက ကနဦး အခြေအနေ ဖြစ်ပြီး၊ အစာကို ပါးစပ်ထဲဲ ထည့်တာ၊ ၀ါးစားတာတွေက ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆာပြေလို့ ဒါမှမဟုတ် စားစရာကုန်တဲ့ အခြေအနေ ရောက်တဲ့အခါ အစာစားတဲ့ အလုပ်ရပ်သွားပါတယ်။ တံမျက်လှည်းတာ၊ ပုတီးစိတ်တာတွေလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။ စမှတ်၊ ဆုံးမှတ်နဲ့ ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခု ပါ၀င် ပါတယ်။
ဆယ်တန်းမှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ Sequence & Series သင်ခန်းစာတွေမှာ Iteration သဘောတရားတွေကို အများဆုံးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Maths, Engineering နဲ့ Physics ဘာသာရပ်တွေမှာတော့ Numeriacl methods, Fourier Series လို သင်ခန်းစာတွေပါ။ Programming မှာတော့ ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်စရာ အလုပ်တွေကို For.. Loop, While... Loop, Do... Loop စတာတွေနဲ့ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ Loop တိုင်းမှာ စတင်ရမယ့် ကနဦး အခြေအနေ တစ်ခု ရှိပြီး၊ ပြီးဆုံးရမယ့် နောက်ဆုံး အခြေအနေတစ်ခုလည်း သတ်မှတ်ပေးထားရပါတယ်။ မျှော်လင့်မထားတဲ့ အခြေအနေမှာ ရပ်တန့်နိုင်အောင်လည်း စီစဉ်ထားရပါတယ်။
Mixing, Maths, Programming & Daily Life
အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ - အစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း (Sequence) ၊ ရွေးချယ်လုပ်ဆောင်ခြင်း (Selection) နဲ့ ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်ခြင်း (Iteration) ဖြစ်စဉ်တွေက အမြဲတမ်း ရောထွေးနေလေ့ ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ Sequence ထဲမှာ လုပ်ရမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အတွက် Selection နည်းလမ်းနဲ့ Iteration နည်းလမ်းတွေကို လိုသလို ပူးပေါင်းပြီး အသုံးချ ဆောင်ရွက်ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ အစီအစဉ်တွေ ရေးဆွဲရာမှာဖြစ်စေ၊ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဖြစ်စေ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာ ဖြစ်စေ၊ ပညာသင်ကြားလေ့လာရမှာ ဖြစ်စေ - အစီအစဉ်တကျလုပ်ဆောင်ခြင်း (Sequence)၊ အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီစွာ ရွေးချယ်လုပ်ဆောင်ခြင်း (Selection) နဲ့ လိုအပ်သလို ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းများ (Iteration) ကို ပါးနပ်လိမ္မာစွာ အသုံးချလုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ တကယ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။